यी हुन् स्विस बैंकमा पैसा थुपार्ने ५५ नेपाली !
३ माघ २०७५, बिहीबार ११:१८
२ माघ बुधबार क्यानडानेपाल डट टिभी / खोजपत्रकारिता / नेपाल्लिक्स : ५४ वर्षअघि बनेको ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन’ २०२१ अनुसार, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) ले उपलब्ध गराएको विवरण र खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाल (खोपके) ले गरेको थप अनुसन्धानले ५५ जना नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको फेला परेको छ ।
सुमार्गी र शर्माले विदेशमा लगानी गरेर कानूनको स्पष्ट उल्लंघन गरे । त्यति मात्रै होइन नेपालका सरकारी निकायसँग अनुमति नलिई विदेशी लगानीका नाममा विदेशको आफ्नै कम्पनीबाट नेपालमा रकम भित्र्याउने काम समेत गरे । यसअघि सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार, उनीहरूले नेपालका सरकारी निकायसँग अनुमति नलिई विदेशी लगानीको नाममा आफ्नै एयरबेल कम्पनीबाट नेपाल रकम भित्र्याएका थिए । २०७४ पुसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, “सन् २००८ देखि २०१३ सम्ममा सुमार्गीले ९ पटक गरेर ६ करोड ३१ लाख ८५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर (६ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ५३ हजार ३५५ रुपैयाँ) एयरबेलबाट आफ्ना नेपाली कम्पनीमा भित्र्याएको देखिन्छ ।” यस बाहेक पनि सुमार्गीले अरू विभिन्न विदेशी कम्पनीबाट करीब ६ करोड अमेरिकी डलर (करीब ६ अर्ब रुपैयाँ) अहिलेसम्म नेपाल भित्र्याइसकेका छन् ।
चौधरी परिवारका चार जनाको नाममा विदेशमा लगानी रहेको भेटियो । अरुणकुमार चौधरी र उनकी श्रीमती शिला, छोरा करण र सुर्भान्सको नाममा ट्याक्स हेवन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा अर्सिन लिमिटेड कम्पनी दर्ता छ । आईसीआईजेका अनुसार, सन् २००४ मा दर्ता भएको यो कम्पनीको नेपालको ठेगाना सरस्वती सदन, ठमेल उल्लेख छ । आईसीआईजेका अनुसार, अर्को ट्याक्स हेवन टापु गर्नजीमा दर्ता रहेका दुुई विदेशी कम्पनी यो कम्पनीका साझेदार छन् । टेन्बी नोमिनिज लिमिटेड र ब्रोक नोमिनिज लिमिटेड चौधरीका साझेदार कम्पनी हुन् । टेन्बी र ब्रोक कम्पनीमा को को शेयर होल्डर छन् भन्ने चाहिं खुल्न सकेन । उक्त कम्पनी अहिले अस्तित्वमा नभएको चौधरीको भनाइ छ । चौधरीले भने, “मेरो बच्चा धेरै सानो हुँदा बेलायतका साथीहरूले छोरालाई बेलायतमा पढाउने हो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ कम्पनी खोल भनेका थिए तर खोलिनँ । आईसीआईजेमा कताबाट त्यो खबर आयो थाहा भएन । त्यो आएपछि मलाई धेरै अप्ठेरो पर्‍यो ।”
खासै नसुनिएको अर्को नाम हो रिनुका प्रधान । चुनदेवी, ४ काठमाडौं ठेगाना उल्लेख गरी प्रधानले सन् २००६ मा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा रेस्ट पार्क क्यापिटल इन्क कम्पनी दर्ता गरेकी हुन् । यो कम्पनीमा अन्य दुई नेपालीको पनि लगानी छ । नेपाली ठेगाना थाहा नभएका पुुनम प्रधान र अजयप्रसाद प्रधानले रेस्ट पार्क कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । आईसीआईजेको विवरणमा उनीहरूको ठेगाना सिंगापुर मात्रै उल्लेख छ ।
नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै नचिनिएका श्याममिलन श्रेष्ठको पनि ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा दुुई कम्पनीमा लगानी छ । सोनेट वल्र्ड वाइड लिमिटेड र आईलिंकेज इन्टरनेशनल लिमिटेडमा उनको लगानी रहेको भेटिएको छ । सोनेट वल्र्ड वाइडमा श्याममिलनसहित सात जनाको लगानी देखिन्छ । नेपाली हुनसक्ने नाम थर भएका अन्य दुुई आशिष रौनियार र चिम्पाल रौनियारको पनि सोनेटमा लगानी छ । तर उनीहरूको ठेगाना उल्लेख छैन । अर्को कम्पनी आईलिंकेजमा पनि यिनै दुई, श्याममिलन र अर्का नेपाली खुश्बु सरकारको लगानी रहेको आईसीआईजेको विवरणमा उल्लेख छ ।
हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आएका श्यामिलनले खुश्बु सरकार श्रेष्ठलाई चिनेको बताए । “उहाँसँग मिलेर हङकङमा १४/१५ वर्ष अगाडि ‘जिरो एकाउण्ट’ को कम्पनी खोलेको हो । अहिले त्यसको अस्तित्व समाप्त भइसक्यो” श्रेष्ठले भने, “केही काम लाग्छ कि भनेर खोलेका थियौं ।” श्रेष्ठको यो प्रतिक्रिया पछि हामीले हङकङको कर्पोरेट रजिष्ट्रिजको विवरण हेर्‍यौं । कर्पोरेट रजिष्ट्रिजका अनुसार, सोेनेट इन्टरनेशनल नामको कुनै कम्पनी हङकङमा दर्ता छैन । कर्पोरेट रजिष्ट्रिजको दस्तावेज अनुसार आइलिंकेज इन्टरनेशनल लिमिटेड दर्ता छ । तर, त्यसका लगानीकर्ता दुई मलेशियन नागरिक हुन् श्याममिलन हैनन् ।
काठमाडौं र पोखराको सर्जि इलेक्ट्रो मेडिकामा कर्माचार्यकै लगानी रहेको कम्पनी प्रतिनिधि अनिल भुुर्तेलले पनि पुष्टि गरे । “उहाँ नेपालको पहिलो बायोमेडिकल उद्योगी हुनुहुुन्छ । नेपालको पहिलो कर्पोरेट हस्पिटल, काठमाडौं हस्पिटलको मालिक पनि हो उहाँ” भुर्तेलले भने, “नवलपरासीमा औषधि उद्योग छ । अहिले छोरा राजु कर्माचार्यले हेर्नुुहुन्छ ।”
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष रहेका शशिकान्तकै जोडबलमा ३१ भदौ २०७५ मा सरकारले आयातित चिनीको परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरिदिएको थियो । अग्रवाल संलग्न उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले सुविधा दिएको यो पहिलोपटक थिएन । स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर सरकारले ३० प्रतिशत पुर्‍याइसकेको छ । परिणाम उपभोक्ताले महङ्गोमा चिनी किन्नु परिरहेको छ ।
आईसीआईजेबाट प्राप्त विवरणहरूले विदेशमा पैसा राख्न विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेको पनि भेटियो । हरिशकुमार तोदी अग्रवाल, बिजेस तोदी र विन्दु तोदीको विदेशी लगानी बारेको विवरणबाट यो स्पष्ट हुन्छ । सन् २००७ मा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा उनीहरूको नाममा उडस्टक युनिभर्सल लिमिटेड नाम गरेको कम्पनी दर्ता भएको रहेछ । यसमध्ये बिजेश र हरिशले विराटनगर–९ मोरङको ठेगाना उल्लेख गरी नेपाली राहदानी पेश गरेका थिए । रोचक कुरा, भारतस्थित हरियाणा ठेगाना उल्लेख भएकी विन्दु तोडी पनि यही कम्पनीको लगानीकर्ता हुन् ।
बजगाईले नेपालमा ट्याक्स हेवनको लगानी समेत भित्र्याएका छन् । उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सूची अनुसार, उनले अष्ट्रेलियन ‘सिल्भर हेरिटेज’ समूहसँग साझेदारी गरी तीन देशमा विभिन्न कम्पनी खोलेर नेपालमा लगानी ल्याएको देखिन्छ । बजगाईसँग साझेदारीमा होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी तीन पटकमा ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नेपालमा लगानी आएको देखिन्छ । यो लगानी हङकङ, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् र बेलायतका तीन कम्पनीसँग सम्बन्धित छ । ती कम्पनीहरूमा हङकङको ‘आईआरपी एशिया लिमिटेड’ अन्तर्गत ‘सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड’, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ‘सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड’ र बेलायतको ‘सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड’ हुन् । बजगाईसँग साझेदारी गर्ने गरी लन्डनका नागरिक डेविड फ्र्यांकेलले पनि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याएका छन् ।
प्राप्त विवरण अनुसार, व्यवसायी चन्द्र ढकालले बेलायतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय ‘कम्पनिज हाउस’ मा सन् २००२ अगष्ट ९ मा सनवर्ड कम्प्युटर कन्सल्ट्यान्टस लिमिटेड खरीद गरेको देखिन्छ । आईसीआईजेको सहयोगमा प्राप्त कागजात अनुसार, उनले खरीद गरेको १२औं दिनमा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस (आईएमई) युके लिमिटेड बनाएका थिए । यसमा ढकाल, उनका भाइ हेमराज, दुुई बेलायती र दुई गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेका छन् । गैर आवासीय नेपालीहरूमा बेलायत बस्ने अनिलकुमार लामिछाने र कमल पौडेल हुन् । २१ अगस्ट २००२ मा बेलायतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा ढकालले भनेका छन्, “नेपाल र मलेशिया दुवैमा हामी लिमिटेड कम्पनी हौं । कम्पनीको नाम इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस (आईएमई) लिमिटेड हो ।” (हे. पत्र)
मल्लको प्रतिक्रिया लिन हामीले होटल मल्लमा पटक पटक सम्पर्क गर्‍याैँ । आफूलाई मल्लको स्वकीय सचिव बताउने सुरेन्द्र नाम गरेका व्यक्तिले ‘म खबर पुर्‍याइदिन्छु, भोलि कल आउँछ’ भने । तर, चार दिनसम्म पनि सम्पर्क हुन सकेन ।